Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa Sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa 30 000 $ bishiiba kaliya ka soo buugaagta Kindle.
Bishii Abriil, Forbes ayaa ka warbixisay qoraaga iskiis u sameeyay Mark Dawson. Dawson wuxuu qoraa buugaag vosk ku qori kara dambiyada. Laakiin, taasi maahan sheekada dhabta ah halkan. Wuu sameeyaa 450 000 $ sano ah buugaagtaas.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bal walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. Iyada oo sahlanaanta daabacaadda buuga elektarooniga ae ee Amazon, waa hubaal aagagga a kuwa doonaya v ay galaan boggooda waa v ay eegaan.
V kastě oo aadan awood in yeelan karin inaad měl iyo jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka, mid ka mid ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada blogka ayaa ah inaad abuurto durdurro badan oo hakhli oo.
Buugagtu waa dakhli hadhaaga ah. Buugga hal mar ayaad qoraysaa, waadna sameyneysaa, gelineysaa, waxayna lacag kuu dhiganeysaa illaa iyo inta la iibinayo. V kasta oo ay waxyar ka sii badan tahay (waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan marmarka qaarkood dhiirrigeliso buugga), taasi waa aasaaska aasaasiga ah.
Uprostřed ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan barta blogka waa inaad bilaabi doontaa inaad ururiso waxyaabo badan oo waqti ka badan. Waxaad si salan on bilaabi kartaa in aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal iyo buugaag.
Dooro mowduuc. Tusaale ahaan, haddii aan rabay inaan xiro qaar ka mid ah fariimahayga ku yaal Guriga Caruurta, waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka bezlepková". Waxaan markaa ka raadin karaa koobab ku saabsan qaybtaas, fiiri waxa soo baxay, oo laga yaabo inuu ku daro dhowr ka mid ah kuwa u gaarka ah iyo talooyin qaar akhristayaasha oo ku dhejiya buug loogu talagala.
Ka dhig mawduuc balaadhan. Haddii aad rabto buug weyn, waxaad dooran kartaa mawduuc balaadhan. Tusaale ahaan, haddii Jerry doonayo, wuxuu abuuri karaa buug loogu talagalay WHSR "Talooyinka qoraalka ee loogu talagalay dadka cusub". Wuxuu horey u leeyahay hage weyn si u bilaabo aasaaska buugiisa. Wuxuu markaa kaftamayaa marwalba qoraallada loogu talagalay talooyinka ugu muhiimsan oo ay wadaagaan.
Ka faa’iidaysiga dardargalinta isdhaafsiga. Blogkaagu waa inuu ahaadaa waddo laba dhinac ah. Waxaad kor on qaadi doontaa buugaag aadna in diri carda gaadiidka Amazon and aad iibsato nuqul. Kuwa buuggaaga ku qoran Amazon waxay akhrinayaan waana in ay helaan xiriirka iyo booqdaan bartaada.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo Kindle on Amazon. Hase yeeshee, furashada xisaabtu waa bilaash.
Marka ay timaado ebooks, qaabka ugu fudud ayaa ka sii fiican. Isku day inaad ku dhejiso písmo aasaaska ah oo kaowow wax kasta oo wata qoraal ama muuqaallo. Haa, xitaa cinwaanka. Kaliya měl iyo jeer uma tarjunto si fiican qaab ebook ah.
Amazon waxay bixisaa tilmaamo laguugu soccer iyada oo loo marayo geedi socodka buuggaaga loogu talagalay Kindle. Waxaa lagu magacaabaa Dhisidda Buuggaaga Xajka.
Načíst další tagy internetového připojení daabacaadda Kindle Direct (KDP)
Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa 30.000 dòlars bishiiba kaliya
الإعلان السياقي للمدونين – الممارسات الأخلاقية والملاءمة